ခွန်ဆိုင်း - ကိုဗစ် ဒိုင်ယာရီ ၂၁ - MoeMaKa Media
Home / Community / Coronavirus / Experience / Khun Sai / UK / ခွန်ဆိုင်း - ကိုဗစ် ဒိုင်ယာရီ ၂၁
ခွန်ဆိုင်း - ကိုဗစ် ဒိုင်ယာရီ ၂၁
ခွန်ဆိုင်း - ကိုဗစ် ဒိုင်ယာရီ ၂၁(မိိုးမခ) ဧပြီ ၁၀၊ ၂၀၂၀
မနေ့က ဘောရစ်ဂျွန်ဆင်ကို အောက်စီဂျင် ပေးနေရတယ်။ အသက်ရှူအားကူစက် ( Ventilator )ပေါ် တင်ရတဲ့ အခြေအနေတော့ မရှိပါဘူး ။ မတင်ရပါဘူး လို့ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ တဲ့အခါ စိတ်ထဲ တထင်ထင့်ပါပဲ ။ ဗင်တေလေတာပေါ် မရောက်ပါစေနဲ၊ မတင်ရပါစေနဲ့ပေါ့ ။. သူကျရင် ခေါင်းဆောင်ကျမှာ ကိုး ။ကိုယ့် အကောင့်ထဲက သမားတော်တယောက်တင်ထဲပို့စ်တွေ မှာ ဗင်တေလေတာပေါ်တင်ရတဲ့ ကေ့စ်မျိုးဆိုရင် သူ့တွေ့မိသလောက် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် တောင် အဖိတ်အစင် ရှိနိုင် တယ်။ အသက်ရှူစက်ပေါ်က လူနာတွေက ကုန်းပေါ်မှာနေရင်း လေငတ်နေတဲ့ လူတွေနဲ့ တူတယ်လို့ နှိုင်းပြထားတော့ စိတ်ထဲမှာ မြင်ကြည့်-စိတ်မကောင်းဘူး ။ ရောဂါ က ပြင်းထန်တဲ့လူဆိုရင် ၁၀ ရက် ပတ်ဝန်းကျင် မှာ တကယ့် အဆုံးအဖြတ်တွေ ဖြစ်လာရော။
ဒီနေ့ကျတော့ ဘောရစ်ဂျွန်ဆင် ထထိုင်တယ်။ စကားပြောနိုင်တယ် ။ [ ( Engaging ) လို့ သတင်းထဲမှာ သုံးထားတော့ စကားပြောနိုင်တယ်လို့ ရမ်းတုတ်ထားတာ ။သူတို့သတင်းထုတ်ပြန်တဲ့ ဘက်က လဲ ဒီလောက်ပဲ ပြောနိုင်မယ်ထင်တယ်၊ လူနာကို တိုက်ရိုက်ကြီး ရိုက်ကူးပြတယ်ဆိုတာ မရှိဘူး ။ ပရိုက်ဗေဆီ က ရှိတယ် ] ဆိုတော့ စိတ်နဲနဲသက်သာလာတယ်။ ဆက်ဆုတောင်းပေးရမှာပေါ့။ ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးကလဲ သူ့အတွက် ဆုတောင်းနေကြပါတယ်. အဲလစ်ဇဘက်ဘုရင်မကြီးဆီကလဲ သူ မပြတ်နားစွင့်နေတယ်လို့ ပြောတယ်. လေဘာပါတီခေါင်းဆောင်တွေကလဲ ဝိုင်း ဆုတောင်းပေးနေကြတယ်. ဒီအချိန်မှာ ပြိုင်ဘက်စိတ်ထား မဟုတ်တော့ဘူးလေ။
အင်္ဂလန်က အဆိုးဆုံးအနေအထားကို ရောက်နေတယ်ပြောရမလား။ တရက်ထဲ အဖိတ်အစင် မနေ့က ၇၈၆ ယောက်ကို များလှပြီထင်နေတာ ဒီနေ့ ကျတော့ ၉၃၈ ယောက်ဆိုတော့ ......ဘုရားဘုရား။ ပေါ့စတစ် က ၆သောင်း ၇ရာ သုံးဆယ့်သုံး .......... စုစုပေါင်း ဖိတ်စင်တာက ၇၀၉၇ ။ တရက် တရက်ကို စစ်နေရတဲ့ နှုန်းက ၁၄၀၀၀။ ခြောက်ခြားစရာ ဒေတာတွေ ။
အမေရိကန်က ပိုဆိုးတယ်။ ခုနေတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အဆိုးဝါး ဆုံး ထိခိုက်တာခံနေရတာလို့ ပြောလို့ ရတယ် ။ တရက်ထဲ ၁၈၀၀ လောက်ပျက်စီးနေကြတာဆိုတော့ ( မနေ့က ၁၇၃၆ ယောက်ဖိတ်စင် ) ။ ဘန်နီဆင်းဒါးတယောက် ဒီမိုကရက်တစ် သမတလောင်း အဖြစ် မဲဆွယ်တဲ့ နေရာကနေ ထွက်ပြီလို့ ကြေငြာလိုက် တယ် ။ ကောင်းပါတယ်. ခုလို ကာလမှာ အာဏာ နဲ့ နိုင်ငံရေးတွေကို --- အကြောင်း မလုပ်တာ။
ပြင်သစ်မှာ အဖိတ်အစင် က ၁၀၀၀၀ ကျော်သွားပြီမို့ လို့ ထပ်တိုးပြီး လူတွေ အပြင်ထွက်တာကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လုပ်နေကြရပါပကော။
စပိန်က အရင် ၄ရက်လောက် အထိ အသေအပျောက် နှုန်း နဲနေရာက နေ အခု ပြန်တက်လာပြန် လို့ စိတ်ညစ်နေတယ်၊ မနေ့က တရက်ထဲ ၇၅၇ ယောက်ဖိတ်စင်တယ်။ စုစုပေါင်း သူ့နိုင်ငံက ၁၄၅၅၅ ယောက် ဆုံးရှုံးခဲ့ကြပြီ။
အီးယူက သိပ္ပံပညာရှင်တွေ ကတော့ နှုတ်ထွက်သွားလိုက် ကြတယ်. သူတို့ အကြံပေးတာကို ဥရောပခေါင်းဆောင်တွေ မလိုက်နာလို့ ခုလို့ ပိုးစိုးပက်စက်တွေ ဖြစ်နေရတာဆိုပြီး။ ခက်တော့ခက်တယ်။ လူတွေဖက် က လတ်တလောငတ်ကြမယ့် ကိစ္စ ၊ ဒီမိုကရေစီ ဆုံးရှုံးကြတော့ ဘယ်ရွေ့ ဘယ်ညာ ...အစိုးရက အပြစ်အပြော ရုတ်တရက်မခံချင် ။ စီးပွါးရေးကို ချိန်ဆ ။ချိန်ဆရင်း နောက်ကျ ။ ခုလိုသေကြပြန်တော့လဲ အစိုးရက မစောင့်ရှောက်နိုင်ဘူးထပ် ပြော ။ ခေါင်းဆောင်တွေ အဖြစ်မှာ မသေခင်လဲ တပြစ်။ သေတော့လဲတပြစ်။ ကိုဗစ်ရေ ...မင်းလေ
Charity အဖွဲ့တွေ ရပ်တည်ရေးမှာ အရောင်း ဆိုင်တွေ ဖွင့် တော့ ဝင်ငွေနဲနဲ ရတယ် - လူထု ဆီက အလှူငွေတွေ နဲနဲ ရတယ် ။ ဒီလိုနည်းတွေ နဲ့ ကြိုးစား ပြီး နှစ်ပေါင်း ရာချီ ရပ်တည်လာတဲ့ ပရဟိတအသင်း သာရေးနာရေး အသင်းတွေ အခု မခံနိုင် အကုန်ပြိုလဲ သွားကြပြီ၊ ။ charity ဆိုင်တွေ ပိတ်ရတာက တဖက် ၊ လူတွေဆီ ကလဲ မလှူနိုင်ကြတော့ဘူးလေ ။ ဗြိတိန် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးက သန်း ၇၅၀ နဲ့ ကျားကန်ပေးပါ့ မယ်ပြောတော့ ပြော တယ်။ ဒါပေမယ့် သူက စီးပွါးရေး လုပ်ငန်း အားလုံး- ချာရတီ အသင်းအားလုံးကို ကျွန်တော်ကာကွယ်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး ( I can’t protect every business and charities ) လို့ မနေ့က ထွက်ပြီး ကန်ပြောလေး ပြော သွားတာတွေ့တယ် ။ အမှန်ပဲလေ။ သင်္ဘောမြုပ်နေရင် ရသလောက်ပဲ ဆယ်လို့ ရမှာ။ အကုန်ဆယ်လို့ မရဘူး ။
လန်ဒန်မှာ ပြေးဆွဲနေတဲ့ ဘတ်စ်ကားကြီးတွေထုံးစံ က အရှေ့ပေါက်က တက် ၊ ပိုက်ဆံဖြည့်ထားတဲ့ ကဒ်ကလေးတို့ပြီး လက်မှတ်ဖြတ် ၊ ခရီးသည် တိုင်း ကိုယ့်ခရီးဆုံးရင် အလယ်ပေါက်က ပြန်ဆင်းကြရတဲ့ စနစ် . အခု ကိုဗစ်လုပ်လို့ ဘတ်စ်ကားမောင်းတဲ့ ဒရိုင်ဘာတွေ( ၉ယောက် ) ဆုံးပါးကုန်ကြပြီ ဆိုတော့ မနေ့က သေဘေးနီးတဲ့ ဒရိုင်ဘာထိုင်တဲ့ ရှေ့ပေါက်ကို ပိတ်ရတယ်။ ရှေ့ပေါက်က မတက်ရတော့ဘူး တဲ့ ။ အလယ်ပေါက်ကတက်ရ တဲ့စနစ်ဖြစ်သွားပြီ။ လက်မှတ်ကို ဘယ်လိုဖြတ်မလဲတော့ မသိဘူး။ ကိုဗစ်နှိပ်စက်တာများ ။
လူတွေ ဂူအောင်းတာ ရက်နဲနဲ ရလာတော့ စိတ်ရောဂါတွေ ဖြစ်လာကြပုံ ။ ကလေး ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းလဲ ပိတ်လှောင်ခံထားရ၊ အပြင်မထွက်ရတော့ စိတ်ရောဂါ ရနေသတဲ့ ။ အခု လူတွေ စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက် အထူးဆက်သွယ်ရေး တယ်လီဖုန်းလိုင်းတွေ ဖွင့်ရတဲ့ အကြောင်း ပြောတယ်. ( mental health hot line for staff )။ ကိုယ်ကတော့ စိတ်ကြပ်လာရင် အပြင်ထွက်ပြီးခြံထဲ စိုက်ထားတာလေးတွေ လျှောက်ကြည့်တာပဲ ။ မြေဆွတာပဲ ။ စိုက်လို့ တခါမှ မအောင်တဲ့ ဗူးစေ့နဲ့ ငြုပ်စေ့လဲ ပျိုးလိုက်သေးတာပဲ ။
စိတ်ပူတဲ့ အတိုင်း ဖြစ်လာတယ်။ . လူတန် Luton မြို့က လူအိုရုံ တခုမှာ ဘိုးဘွား ၁၅ ယောက် ဖိတ်စင်သွားတဲ့သတင်း တက်တယ် ၊ သွေးစစ် အဖြေမှာ ၅ ယောက်က ပေါ့စတစ် ရတယ်။ မြောက်အိုင်ယာလန်မှာလဲ အလားတူဖြစ်နေတယ်။ လူအိုရုံနဲ့ ဆေးရုံက ဆက်စပ်နေတာ။ ကျောက်ကပ်ဆေး- ဆီးချိုချိန် -သွေးဖေါက် လူအိုတွေပုံမှန်ဆေးရုံသွားသွား နေရတော့ ရောဂါက သယ်လာပြီပေါ့ ။ ဝန်ထမ်းတွေလဲ PPE တွေ လိုတယ်။ လိုအပ်နေတဲ့ နေရာတွေဆီ ကို လိုအပ်သလောက် ဘယ်တော့ လာမှာလဲ ။ ဘယ်သူမှ မပြောနိုင်။ ဘယ်သူမှ မတတ်နိုင် ၊ ဒီကပ်ဘေးကြီးထဲ ။
မြန်မာထဲက အထူးကု ဆရာဝန် ၂ယောက် လဲ ယူကေ ကိုဗစ်ကို တိုက်ပွဲဝင်ရင်း အသည်းအသန်ယူနစ်ထဲရောက်သွားပြီ။ အသက်ရှူ အားကူစက်ပေါ်ရောက်နေတယ်လို့ ကြားတယ်။ မိတ်ဆွေတယောက် ပို့စ် မှာလဲ သူမကို စာ သင်ပေးခဲ့တဲ့ သူမဆရာ မိုက်ခရို ဘိုင်အိုလောဂျစ် တယောက်ဆုံးပါးလို့ ဝမ်းနည်းကြောင်း တင်ထားတယ်။
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌါန ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို မှန်မှန်ရောက်တယ်။ ရောဂါ ပေါ့စတစ် ဒေတာကိုတော့ မမြင်ချင် မကြားချင်ဘူး။ လူတွေဘက်က တုန့်ပြန်တဲ့ ပေါ့စတစ် တွေပဲ မြင်ချင် ကြားချင်တယ်။
ကိုဗစ်ဇာတ်လမ်းကို စခဲ့တဲ့ ဝူဟန်မြို့ကတော့ ၇၆ ရက်ကြာ ရေရှည် တိုက်ပွဲမှာ ကိုဗစ်ကို အနိုင်တိုက် အလံထူလိုက်နိုင်ကြတဲ့ သတင်းတွေ တက်နေလို့ ။ လေကြောင်းလိုင်းနဲ့ ရထားလိုင်းတွေပြန်ဖွင့်နေလို့ ။ , လူတွေ သတိနဲ့ အပြင်ထွက်လာကြနေလို့ ။
ကျောင်းတွေ ဖွင့်နေတုန်းက ဝင်ငွေနည်း မိသားစုတွေရဲ့ ကလေးတွေကို ယူကေ အစိုးရက ကျောင်းတွေ မှာ အခမဲ့ မနက်စာ ကျွေးမွေးတဲ့ အစီအစဥ် လေး ရှိတယ်။ အခု ကျောင်းတွေပိတ်ထားပေမယ့် အဲဒီ အစီအစဥ်ကို တော့ မဖျက်လိုက်ဘူး။ ဆက်ပြီးထောက်ပန့် ကျွေးမွေးတယ်။ မနေ့က ကျောင်းအုပ်ကြီးတယောက်က ကျောပိုးအိတ်ကြီး တအိတ်။ လက်ဆွဲအိတ်တွေလဲ လက် ၂ဖက် အပြည့်နဲ့ ။ အစားအစာ ပါဆယ်ထုတ် တရာကျော်လောက်ကို ကိုယ်တိုင် လွယ်ရင် ပိုးရင်း ဆွဲရင်း ခလေး တွေ အိမ်ပေါက်စေ့ လမ်းလျှောက်ပြီး လိုက်ပို့ပေးနေတာ ကို တွေ့ရတယ်၊ သူ အချိန် ၂နာရီလောက် ယူရတဲ့ အကြောင်း ။ စုစုပေါင်း ၅ မိုင်လောက် လမ်းလျှောက်ရတဲ့ အကြောင်းပြောတယ်.။ ခလေးတွေက ဘီဘီစီ ရုပ်သံကနေ သူ့ကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြတော့ သူ့မှာ မျက်ရည်တွေ ကျ ။
ဂျူးတွေ အင်မတန် အလေးထားတဲ့ ဘာသာရေးပွဲ Passover ဆိုတာ မနေ့ကပါ ။ သူတို့ ဘိုးဘေးဘီဘင်တွေ အီဂျစ်ကနေ လွတ်မြောက်ရာလမ်း ( Exodus ) ထွက်ကြတဲ့ အချိန်- အလျင်စလို ထွက်ကြရတော့ ပေါင်မုန့်တွေကို အမြန်နည်းနဲ့ မကျက်တကျက် နှဲကြ ဖုတ်ကြရတဲ့နေ့ပေါ့၊ မနေ့က ခါတိုင်းလို လူတွေတစုတဝေး စုပေါင်းမကျင်းပနိုင်တော့ပဲ- ဂျူးဘာသာရေးခေါင်းဆောင်က သူ သေချာပြင်ထားတဲ့ စားမြိန်ထုတ် ( Seder feast ) တွေကို ပါဆယ်ပို့တဲ့ အကြောင်း ။ ခုတပတ်ကုန် ခရစ်စယာန်တွေ ရဲ့ အီစတာ ပွဲ ( Easter )ကိုကော ခရစ်စယာန်တွေ ဘယ်လို များ - ဆင်နွဲကြမှာပါလိမ့်။
ကျွန်တော် မနေ့က ဘောရစ်ဂျွန်ဆင်ဆီက စာတစောင် ရတယ်. ဘယ်လို နေဘို့ ဘယ်လိုထိုင်ဘို့ အလုပ်သွားသူကလဲ မသွားမဖြစ်လို့သွားရရင် ဘယ်လို သွားဘို့။ ရောဂါဖြစ်လာရင် ရောဂါလက္ခဏာက ဘယ်လို ။ ဘယ်လို ရင်ဆိုင်နေထိုင်ဘို့ ၊ သူတို့ အစိုးရဘက်က လဲ ဘယ်လိုဘယ်ပုံ အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း သူ့လက်မှတ်နဲ့ပို့လာပါတယ်။ လူတိုင်းဆီ ပို့တာပါ ။
ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာလဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တယောက် လူထုကို အွန်လိုင်းကနေ တွေ့ဆုံ မေးမြန်း အကြံပေးတာ ညွှန်ကြားတာတွေ လုပ်နေတာတွေ့လို့ ဝမ်းသာတယ်။ အရင်အစောပိုင်းက သူ့ ပြည်နယ်ခရီးစဥ်တွေ စီစဥ်ထားတာ ပြီးတဲ့ အထိ လက်ဗလာ အတိုင်းလျှောက်သွားနေတာတွေ့တုန်းက အသဲယားနေတာ။ ကိုဗစ် က ဒီမှာ စနေပြီဆိုတော့ အဝေးက နေ ရင်မ ။ လူတွေ ကလဲ အရမ်းလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေကြတာ ။ ။ခု အွန်လိုင်းက စကားပြောတော့ လူတွေ လက်လှမ်း ဆွဲလို့ မရကြတော့ဘူး။ ကောင်းတယ်။ စိတ်နဲနဲ ချမ်းသာတယ် ။ ဘယ်တိုင်းပြည်မှာမှ ကိုဗစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးခေါင်းဆောင်တွေ တိုက်စစ်မှူးတွေ မကျစေချင်ဘူး။
ခုရက်ထဲ ကိုယ်လဲ လုပ်စရာလေးတခု လုပ်တယ်။ အချိန်နဲ့တပြေးညီ ဖြစ်-သေ- ကောင်း ကိန်းဂဏန်း ဒေတာတွေ တင်ပေးနေတဲ့ ကိုဗစ်ကမ္ဘာ့ မြေပုံက နေ တိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံကြီး ၈ နိုင်ငံ ရဲ့ ရောဂါ ရ နဲ့ သေဆုံး ဒေတာတွေ ။ အာဆီယံ ၁၀ နိုင်ငံရဲ့ ဒေတာတွေ ။ အိန္ဒိယ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် စတဲ့ စိတ်ဝင်စား နိုင်ငံနဲနဲ ရဲ့ ဒေတာတွေကို ဇယားချ ဆွဲတယ်။ နိုင်ငံ အလိုက် စီတယ်။ ရေးမှတ်ထားတယ် ။ တပတ်တခါ နိုင်ငံတွေရဲ့ အတိုးအဆုတ် တွေ နှိုင်းယှဥ်ကြည့်ချင်လို့။ ဒေတာတွေက မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးကို ပြောင်းနေတာမို့ ခုလို ဇယားချ မှတ်လိုက်မှ ဘယ်တိုင်းပြည်က ကိုဗစ်ကို နိုင်နေတယ်။ ဘယ်တိုင်းပြည်က ကိုဗစ်ကို ရှုံးနေတယ် သိမှာ ။
ခွန်ဆိုင်း ( ၉-၀၄-၂၀၂၀ )
ခွန်ဆိုင်း - ကိုဗစ် ဒိုင်ယာရီ ၂၁ Reviewed by MoeMaKa on 6:00 AM Rating: 5